Deeq lacageed oo ay soo dhiibeen Jaaliyada dalka Norwey, oo la gaarsiiyay Deeganka Gendershe
Loading...	Home Wararka Deeq lacageed oo ay soo dhiibeen Jaaliyada dalka Norwey, oo la gaarsiiyay Deeganka Gendershe
Deeq lacageed oo ay soo dhiibeen Jaaliyada dalka Norwey, oo la gaarsiiyay Deeganka Gendershe	Tuesday, 01 May 2012 20:25	jaaliyadda norwey oo isu taagtay xilna iska saratay,sidii ay gacan ugu geesan lahaayeen,dhibta kataagan deegaanka,ayaa noqoneynin,tii ugu horeysay ee lageeyo deegaanka.
jaaliyadda oo lagu xasuusto isku duubnideedi iyo ka dhexmuuqashadeedi hiilka iyo hoogaba lahaa ee deegaanka ay ka geesteen ayaa waxaa uriyaaqay odayaasha dhaqanka.
agoonta udhalatay deegaanka,weliba waalidkoodi ku dhinteeen difaacii deegaanka 2007kii,ayaa waxay balan qaad buuxda ka heleen walaalahoodi kunool dalka norwey.
iyadoo tiro dhawr jeer ah ay jaaliyadda shir isugu timid ku cadeeyay mawqifkoodi ku aadan dadka iyo deeganakaba
dhawr jeer oo ay odayaasha soo jeediyeen baaq ku aadan in lasoo gaaro dadka iyo deeganaka,ayaan jirin cid dheg jalaq usiisay marka laga reebo jaaliyadda kalyiah ee leh hogaan mideysan,kuna nool dalka norwey.
sidaad ku arki doontaan sawirada waxaa kamuuqda caruur ay kamuquato diif,taasoo sabab u ah,wax kaqabasha la aanta ka taagan dhiibatada haysata.
deeqdaan ayaa kusoo aaday xilli deeganaka dhaawac aad ubalaaran gaarsiiyay abaartii kudhufatay dlakeeni hooyo.
taaso aysan hay`ad,jaaliyad iyo shaqsiba cid gacan ka gaysatay.
WAXAA QORAY:Saalax axmed maxamed shacdoow